Liisin iyo imtixaanka daroowalnimada - Trafikverket
Liisin iyo imtixaanka daroowalnimada Stäng
Nuvuarande sida: Liisin iyo imtixaanka daroowalnimada
Waxaad hey’adda jidadka xafiiskeeda oo loogu tala galay imtixaanka daroowalnimada ku sameeyneysaa imtixaanka aqoonta iyo imtixaanka wadida oo loogu tala galay baaboorta shakhsiyeed, dhugdhugleyda, baabuurka xamuulka, baska iyo mootada. Waxaad sido kale imtixaanka aqoonta iyo daroowlnimada uu sameeyn karta tusaale ahaan aqoonsiga daroowalnimada tagsiga.
Balanso imtixaanka leysinka
Dhinaca adeega "Boka prov" (fiiri isku xiraha hoos ku qoran) ama xafiiska adeega macaamiisha ee imtixaanka wadista baabuurta waxaad ka balansan kartaa waqti imtixaanka qoraalka iyo imtixaanka wadida/kaxeynta.
Xafiiskeena adeega macaamiisha imtixaanka wadista baabuurta taleefoon kiisu waa: 0771-17 18 19. Wuxuu furan yahay isniin ilaa jimco waqtiga 08.00 – 16:30.
Intaa inka badan ooku saabsan imtixaanka leysinka waxaad ka aqrinsan kartaa boggaga swidhishka ee imtixaanka leysinka iyo imtixaanka wadida/kaxenta (fiiri isku xiraha hoos ku qoran)
Ku boggag ku saabsan leysinka iyo imtixaanka waddida/kaxeyta baabuurta (af iswidhesh)
Imtixaanka xirfada baabuur wadidda
Xafiiska imtixaanaadka baabuur wadidda ee maamulka gaadiidka ama meelaha lagu qaabilo dadka leysin doonkaa waxaad ku sameynkartaa imtixaanka qoraalka iyo midka wadida ee leysinka taksiga, aqoonsiga inaad qabiir ku tahay xirfadna u leedahay gadiidka, aqoonsiga kartida xirfadda iyo aqoonsiga wadidda maxaliga(ku' kooban meel) ah.
Intaa inka badan ooku saabsan imtixaanka xirfadda baabuur wadidda waxaad ka aqrisan kartaa boggageena iswidhishka (fiiri isku xiraha hoos ku qoran)
Ku bogagg ku saabsan imtixaanka xirfadda baabuur wadidda (afka iswideshka)